कोरो’ना प्रभा’वित फुटबलक’र्मीलाई राहत दिन एन्फाले गरेको प्र’स्ताव फिफाद्वा’रा स्वी’कृत…हेर्नुहोस् ।::Point Nepal
काठमाडौं, ४ असार । को¥रोनाबाट प्र’भावित फुटब’लक’र्मीलाई रा’हत दिन अखि’ल नेपाल फुटबल सं’घ (एन्फा)ले गरेकोे १ लाख ड’लरको रा’हत कार्य’क्रम प्र’स्तावलाई फिफाले स्वी’कृत गरेको छ ।
विश्व’भर महामा’रीको रुपमा फै’लिएको को’रोनाबाट प्र’भावित फुट’बलसंग सम्ब’न्धित व्यक्ति तथा सं’स्थालाई रा’हतका लागि एन्फाले प्र’स्ताव गरेको १ ला’ख ड’लरको कार्य’क्र’मलाई फि’फाले स्वी’कृति प्र’दान गरेको हो ।
ए’न्फाले आफुसं’ग आ’बद्ध जिल्ला सदस्य, सं’घ, खे’लाडी तथा अफि’सियललाई दिने आ’र्थिक प्या’केजको का’र्यक्रम फिफा स’मक्ष प्र’स्ताव गरेको थियो । ए’न्फाले जिल्ला, सं’घ
तथा क्लब’हरुलाई समान ७५ हजार तथा रा’ष्ट्रिय टि’मका खेला’डी तथा रे’फ्रीलाई समान १५ ह’\_जार रु’पैयाँ रा’हत दिने प्रस्ता’व गरेको थियो । एन्फाले पेश गरेको रा’हत स’म्बन्धि प्र’स्तावलाई फि’फाले स्वी’कृत गरेको हो ।
ए’न्फाले फिफाबाट प्रा’प्त रा’हत रक’मलाई समान रुपमा
जिल्ला, क्ल’ब, सं’घ तथा खे”लाडी अफि’सियलमा वित’रण गर्न ला’गेको हो । घरेलु फु’टबल सञ्चा’लनको समय अझै तय हुने सकेको छैन । तर एन्फाले वि’श्वकप छनो’टको खे’लको त’यारीकालागि अर्को महिनाबाट रा’ष्ट्रिय टि’मको प्रशिक्ष’ण सुरु गर्ने नि’र्णय गरिसकेको छ ।News24 Nepal
प्रतिविकेट ८ हजार ८४८ रुपैयाँ गौतम बुद्ध रंगशालालाई सहयोग गर्ने सन्दीपको घोषणा…हेर्नुहोस, सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!!
राष्ट्रिय टिमकी फरवार्ड सावित्रा एक्लैले गरिन् ५ गोल…हेर्नुहोस!
रङ्गशाला निर्माणमा धुर्मुसलाई प्रहरीको साथ, दुई प्रहरीले गरे श्रमदान,,,,,,,,, हेर्नुहोस !
सागमा स्वर्ण विजेता शाक्य र बस्नेत नगदसहित सम्मानित